Sales & Services Associate (တောင်ကြီး ၁) | Yoma Bank
Sales & Services Associate (တောင်ကြီး ၁)
မိမိဘဏ်ခွဲအတွက်သတ်မှတ်ထားသော Sales, Services and Profit Targets ပြည့်မှီရေးအတွက် Customer များ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များအားသိရှိပြီးလွယ်ကူသောဘဏ်လုပ်ငန် အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်။
Sales နှင့် referral targets ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်-
-Customer လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီး ၊ ဘဏ်၏ Products & Services ကိုအပြည့်အဝရောင်းခြင်း ၊မိမိနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆက်ထားသော referrals နှင့် follow-up ပြုလုပ်ခြင်း။
-ချေးငွေနှင့် ပတ်သက်သည့်အလားအလာရှိသောအခွင့်အရေးများပေါ်ပေါက်ပါကဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ Officer သို့ညွှန်းပေးရန်။
-Sale & Services ကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပြီး Branch Customer Calling Programs ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
-အပတ်စဉ် အရောင်းအစီရင်ခံစာအားရေးဆွဲ၍ Sale & Service Officer သို့တင်ပြရန်။
-ဘဏ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို Customer များလွယ်ကူမှုရှိစေရန်နှင့် မိမိတို့အနေနှင့်လည်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ရန်။
(Customer Service Standards)
-Customer မကျေနပ်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးရန် follow-upလုပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သေသပ်စွာဖြေရှင်းပေးရန်၊ လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်။
-အဆင့်မြင့်သော Product နှင့် Service Knowledge များတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားရမည်။
-ဘဏ်ခွဲ၏ အခြားဝန်ထမ်းများအားအလုပ်ပြီးမြောက်အောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
-လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း(ဗဟိုဘဏ် / FIU စသည့်)တို့မှ သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများ ၊လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
-ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်၏ လက်ခံနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကောင်းသည် ဟူသောသုံးသပ်ချက်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည်။
-Customer Service ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်များ ၊အဆိုပြုချက်များပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးမှုပေးရန်။
-ဘဏ်ခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် အကူအညီပေးခြင်း ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီဝန်ဆောင်ခများကောက်ခံခြင်းနှင့် ပေးဆောင်ခြင်းများကိုလိုအပ်သလိုပြုလုပ်ပေးရန်။
(ခ) ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းရှိပြီးအပြောင်းအလဲရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင် ခြင်းရှိရမည်။
(ဂ) Business Development တီထွင်မှု ၊မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်။
(င) အမြင့်ဆုံးသော Sales Skills နှင့် Sales သဘောနားလည်မှု ၊Financial Service Sector တွင် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
(စ) အရေးကြီးသော ၊အဓိကဖြစ်သောဘဏ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနားလည်ထားသူဖြစ်ရမည်။
(ဆ) ဘဏ်၏ ချေးငွေလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြင်ဆင်မှုများနှင့် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်မှု တာဝန်များအား ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနားလည်ထားသူဖြစ်ရမည်။
(ဇ) လုပ်ငန်းအကျိုးအမြတ်ကိုအာရုံစိုက်သူ ၊လူသားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ ၊ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဈ) စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများအားရှောင်ကျဉ်၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တာဝန်သိစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ည) Customer သိရှိလိုသောအချက်များကိုအရေးထားအာရုံစိုက်၍ စဉ်းစားဖြေကြား ပေးနိုင်ရမည်။
(က) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) LCCI Level II ,III (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေး Diploma တစ်ခုခုရရှိထားသူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။
(ဂ) Microsoft Word, Microsoft Excel နှင့် E-mail အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
(ဃ)အချိန် ၁မိနစ်အတွင်း English စာလုံးရေအနည်းဆုံး၂၅လုံးရိုက်နှိပ်နိုင်ရမည်။
(က) အမြင့်ဆုံးသော Sales skills နှင့် Sales သဘောနားလည်မှု ၊Service Sector တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီး Relationship Building ကောင်းမွန်သောသူ။
(ခ) Business Development တီထွင်မှု ၊မှတ်တမ်းမှတ်ရာကျွမ်းကျင်မှု ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ နိုင်စွမ်းအမြင့်ဆုံးရှိပြီးအပြောင်းအလဲရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
Sales Associate ShweProperty.com Sales And Service Associate (Yangon ) ananda Sales And Service Associate (Mandalay ) ananda Sales Associate Access Spectrum Co.,Ltd Sales Executive (Meizan Flour) Wilmar International Limited Business Development Executive ( Education) Myanmar Telecom Gateway (MTG) Sales & Marketing Senior Myanmar Excellence Institute (MEI) Business Development Executive (Fiber Service) Myanmar Telecom Gateway (MTG) Sales Executive (Mandalay Branch) Myanmar Information Technology Pte. Ltd. (MIT) Sales Executive (Rice) Wilmar International Limited Senior Sales Or Sale Executive Bee Logistics Myanmar Co.,Ltd. Sales Promoter Kyaw Chan Thar Trading Sales Executive (Telecom) Myanmar Information Highway Medical Sales Representative (TRB) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Medical Sales Representative (Fresenius) Taungoo DKSH ( Myanmar ) Ltd. Sales Consultant Wall Street English Myanmar